Ogaden News Agency (ONA) – Shiinaha oo lagu cadeeyay inuu ka dambeeya tashwiishka lagu furay warbaahinta xorta ah.
Shiinaha oo lagu cadeeyay inuu ka dambeeya tashwiishka lagu furay warbaahinta xorta ah.
In mudda ahba waxay wadeen gumaysiga Itobiya iskuday lagu tashwiishinayo idaacadaha iyo TV yada kasoo horjeeda gumaysiga itoobiya taasoo aanay ka nabad galin idaacadaha halganka Ogadenya oo uu in badan cadowgu isku dayay inuu hawada Ogadenya ka xihdo gabi ahaanba balse uu ku guulaysan waayey, kadib markay ogaadeen hawl-wadeenada warfaafinta JWXO isku dayadaas ayay dagaal adag oo xaga hawada ah lagashay halkaas oo uu cadowgu kari waayey in si saafi ah looga dhagaysto geeska afrika oo dhan gaar ahaana Ogadenya idaacadaha halganka ee RX iyo ICDS.
Horey ayaan u ogayn inay dawladda Shiinaha arrintaa ka dmabayso hasa ahaatee waxaa hadda cabasha xoogan ka muujiyay tashwiishka lagu furay mawjadaha gaagaaban ee idaacadaha iyo TV-yada mucaaradka ku ah xukunka macangaga ee TPLF wakaaladda ESAT (The Ethiopian Satellite Television) oo ku baaqday inay diyarinayso cunaqabatyn caalami ah in lagu qaado alaabta Shiinaha ay soo sameeyaan. ESAT waxay ka codsatay dawladda Shiinaha inay joojiso taageerada ay siinayaan xukuumadaha Kali-Taliska ah ee ka jira dunida 3xaad.
Xukuumadda dhiigyacabka Itobiya Meles ayaa dagaal adag ku qaaday guud ahaan warbaahinta xorta ah ee ka soo horjeeda maamulkiisa sida shabakadaha Internetka, idaacadaha, iyo TV-yada xorta ah. Arintaana waxaa taageero xagga teknoolojiyadda ah ka siiyay dawladda Shiinaha oo la ogsoonyahay inay ku horeyso qalabka tashwiishika ku fura warbaahinta ka soo horjeeda xukunka shuuciga ah ee dalkaa ka jira.
Ninka madaxda ka ah ururka saxaafdda madaxa banana ee Itobiya oo dalka masaafuris ka ah Mr. Kifle Mulat, ayaa ku tilmaamay wax laga xishoodo taageerada ay dawladda Shiinaha siiso xukunka Meles si looga hortago xoriyadda iyo dimoqraadiyadda. Wuxuu kaloo uu xasuusiyay dawladda Shiinaha inaysan ahayn arin loo dulqaadan karo qalabka lagu cabudhiyo shucuubta ee dawladda Shiinaha ay u soo safrinayaan qaaradda Afrika gaar ahaan Itobiya taasoo sharafta Shiinaha wax u dhimi doonta.
Waxay Shiinaha ka caawiyeen maamulka Itobiya inay waxa loo yaqaano (Internet firewalls) oo xaniba shabakadaha Internetka in lagu daawado hahalkaa. Sidoo kale waxay Ogadenya geeyeen suxuun waaweyn oo tashwiish ku fura idaacadaha halganka kana dhaga-dhageeyaan isgaarsiinta ku xidhan dayax gacmeedyada.